အလွမ်းရောင် | ဥက္ကာကိုကို
အလွမ်းရောင်	Posted by oakkarkoko on November 24, 2008
Posted in: ကဗျာ.	Tagged: မဂ္ဂဇင်းကဗျာ.	Leaveacomment
ဝေးလ လွမ်းလေ ၊ လွမ်းလေ ဝေးလေနဲ့
ဘာကိုမှ မျိုမကျတဲ့ တနင်္ဂနွေလှိုင်းတွန့်ကြီးထဲ
သုညနဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပြေးဆောင့်ပစ်လိုက်ရ
နွေကတော့ လှမလာခဲ့ဘူး ။ ။
ချယ်ရီ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၊ 2008 ။
← တနင်္ဂနွေအယ်လ်ဘမ်	သူမ၏အစွန့်ပစ်ခံ မနက်ဖြန်တို့၏ အလွန် →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...